ပုဂံမြို့သစ်မှ ယွန်းထည်အလုပ်ရုံ - ပုဂံ / Wonder Bagan
ဒီအလုပ်ရုံသင်တန်းက ရိုးရာအစဥ်အလာ ဒီဇိုင်းတွေ နည်းနာတွေ ပေါ်လွင်တဲ့ အရောင်တွေကို သုံးပါတယ်။ သူတို့လက်ရာတွေက ကျွမ်းကျင်လှပါတယ်၊ ပစ္စည်းတစ်ခု ပြီးဖို့အတွက် လပေါင်းအတော်ကြာအောင် ပြုလုပ်ရပါတယ်။ လှပပြီး သက်သာတဲ့ ဆွဲအိတ်ငယ်တွေနဲ့ ပခုက္ကူချည်ထည်တွေကို ထုပ်ပိုးရာမှာ သုံးပါတယ်။
ပြောင်မြောက်တဲ့ အနုစိပ်လက်ရာတွေကို အလုပ်ရုံထဲမှာတင် လုပ်ပါတယ်။ အကြီးစားပစ္စည်းအော်ဒါတွေကိုလည်း လက်ခံပါတယ်။ စစ်စေးနဲ့ ရွှေကို ကားတွေမှာ တွဲဖက် ရောစပ်ပြီးလဲ အသုံးပြုပါတယ်။ သူတို့က ဒီလုပ်ငန်းကို စလုပ်တဲ့မျိုးဆက်သစ် ဖြစ်ပါတယ်။
မကြာသေးခင် ၂၀၁၄ခုနှစ်ကမှ ဖွင့်တဲ့ အလုပ်ရုံဖြစ်ပေမယ့် ဟောဒီအနုပညာရှင်တွေဟာ အထူးသဖြင့် လှလှပပ မြန်မာ့ယွန်းလက်ရာ မတူတဲ့ ပန်းကန်ပုံပန်းအမျိုးမျိုးကို ပြုလုပ်ဖန်တီးပေးနေသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့က အသစ်တီထွင်တဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို ရှင်သန်နေစေဖို့ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကို တဖန်ပြန် အသုံးပြုပြီး ပစ္စည်းသစ်တွေ ဖန်တီးကြပါတယ်။ ပစ္စည်းတွေရဲ့ အရည်အသွေးကို ထိန်းထားဖို့အတွက် သူတို့အနေနဲ့ ပစ္စည်းတွေကို များများစားစား မထုတ်လုပ်နိုင်ပါဘူး။
Beautiful, detailed drawings. Custom orders are accepted. A good spot to learn Myanmar traditional lacquerware in Bagan. Each product is engraved with the workshop's logo, guaranteeing quality.
သူတို့ရဲ့ အမျိုးမျိုးသော မတူကွဲပြားတဲ့ ဒီဇိုင်းတွေက လူသိများပါတယ်၊ ဒီအလုပ်ရုံမှာ သေးငယ်ပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အမှတ်တရပစ္စည်းလေးတွေ အလှဆင်ပစ္စည်းလေးတွေနဲ့ လက်ဝတ်ရတနာထည့်တဲ့ သေတ္တာလေးတွေ ဘူးလေးတွေ ရှိပါတယ်။ ပစ္စည်းတိုင်းကို ကြာရှည်ခံအောင် ရိုးရာအစဥ်အလာအတိုင်း ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ ဝယ်ချင် ဝယ်လို့ရတဲ့ လှပတဲ့ရွှေရောင် ယွန်းထည်တွေ ပြထားတာကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအလုပ်ရုံက လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၁၀၀ ကတည်းက တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး လုပ်ကိုင်လာတာ မျိုးဆက် ၃ ဆက် ရှိပါပြီ။ သူက ပုဂံရဲ့ အလွန့်အလွန် သတိပြုမိစရာကောင်းအောင် ယွန်းထည်တွေကို သဘာဝ ကုန်ကြမ်းတွေနဲ့ တဆင့်ပြီး တဆင့် သူ့ အစဥ်အလာ လုပ်ရိုး အစီအစဥ်အတိုင်း လုပ်ဆောင်တဲ့ အလုပ်ရုံတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအလုပ်ရုံကနေ အိုးခွက်၊ လင်ဗန်းကနေ ဘီရိုအထိ မတူကွဲပြားတဲ့ ပစ္စည်းအမျိုးမျိုး လက်ရာအမျိုးမျိုးတွေကို ပြုလုပ်ပါတယ်။
အော်ဒါ အမျိုးမျိုးကို လက်ခံပါတယ်၊ မူလပုံပန်းအတိုင်း တိတိကျကျ ပန်းပု ထုဆစ်ယူပါတယ်။ သူတို့မိသားစု ပြခန်းဟာ ပန်ကန်ပြား၊ တစ်ရှူးထည့်သေတ္တာ၊ ခွက်တွေ၊ လင်ဗန်းတွေ စတဲ့ မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကို ပြသထားပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အနုပညာလက်ရာတွေက အသေးစိပ်ပြီး လှပတဲ့ ဒီဇိုင်းတွေနဲ့ ပြုလုပ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအလုပ်ရုံကနေ မြင်းမြီးကို သုံးပြီး ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးကို ဒီဇိုင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ထုတ်လုပ်ပါတယ်။ အကြမ်းထည်ရဖို့ မြင်းမြီးနဲ့ ဝါးကိုသုံးပြီး ယက်ရတာ အနုစိပ် အသေးစိပ်တွေ များတဲ့အတွက် အင်မတန် လက်ဝင်ပါတယ်။ လက်မှုပညာသည်ဟာ အရောင်စပ် အရောင်ခြယ် နာမည်ကြီးပါတယ်။ သူက လှပတဲ့အဆင်အမျိုးမျိုး လက်ကိုင်ဖုန်းကာဗာတွေကို ဒီဇိုင်းလုပ်ပါတယ်။
ဒီအလုပ်ရုံက ပန်းကန်ခွက်ယောက်၊ လင်ဗန်းစတဲ့ အသေးအမွှား မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်း မျိုးစုံကို ဒီဇိုင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ထုတ်လုပ်ပါတယ်။ သူတို့က ခွက်အရွယ်အစားမျိုးစုံကို မြင်းမြီးနဲ့ သေသေသပ်သပ် ယက်လုပ်တဲ့ဖက်မှာ အထူးကျွမ်းကျင်ကြပါတယ်။ ထုတ်ကုန်တွေကို ပုဂံမြို့သစ်မှာ ရောင်းချပါတယ်။ တချို့ကိုတော့ ရန်ကုန်ကို တင်ပို့ရောင်းချပါတယ်။
ဒီအလုပ်ရုံပိုင်ရှင်ကတော့ ဘဲဥအခွံဒီဇိုင်းနဲ့ စစ်စေးကို အပူပေး (ချက်) ပြီး သုံးနည်းကို တီထွင်ခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ ယွန်းထည် အမျိုးမျိုးကို ထူးခြားတဲ့ ဒီဇိုင်းနဲ့ မူရင်းတီထွင်တာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံး ပစ္စည်းတွေကတော့ အစစ်အမှန် ဘဲဥခွံနဲ့ လုပ်တဲ့ ယွန်းလင်ပန်း အမျိုးမျိုးနဲ့ ပန်းအိုးတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကြီးမားတဲ့ လက်ရာပစ္စည်းတချို့ကိုတော့ ပြင်သစ်ကို တင်ပို့ပါတယ်။